Yealink UVC20, shamwari yakanaka ye teleworking [Ongorora] | Gadget nhau
Miguel Hernandez | 08/06/2021 10:00 | Yakagadziridzwa ku 29/05/2021 13:57 | Gadgets, General, Reviews
Teleworking yasvika uye inoita kunge inogara. Kune makonferensi akawanda uye akawanda, mharidzo kana misangano yatinoita paterevhizheni kuburikidza neMatimu, Skype, Zoom kana chero imwe nzira inowanikwa pamusika. Nekudaro, iri mune ino nguva patinoona kuti pamwe iyo webcam uye maikorofoni yekombuta yako yanga isina kunaka ...
Izvo zvinodikanwa kusimudzira mashandiro ekamera yedu uye maikorofoni yedu kana tichida kuwana mibairo yakanaka, uye kune izvi isu tine mhinduro dzakangwara. Isu tinotarisa zvakadzama paYebelink's UVC20 webcam, shamwari yakanaka kumisangano yako yeMicrosoft Teams uye nezvimwe zvakawanda.
Mune ino kesi, kunyangwe nekunzwa kuti iyo kavha, chokwadi ndechekuti chigadzirwa chinowanikwa zvakanaka. Yakagadzirwa nepurasitiki zvinenge zvese, isu tine girazi / methacrylate kupfeka kumberi kwese uko kunopa iyo yakanaka premium kunzwa. Iyo sensor muchikamu chekumberi ine mukurumbira wese nepo maikorofoni gomba iri kurudyi uye kuruboshwe iyo LED inoratidza mamiriro echigadzirwa. Isu tinoenderera zvirinani neyakajeka mechina lens yekuvhara system iyo ichatibvumidza isu kuwana zvakavanzika.
Zviyero: 100mm x 43mm x 41mm
Kune chikamu chayo, isu tine base ine hinge system iyo inoita kuti iyi kamera ive ingangoita system uye inowanikwa zvizere kune ese monitors uye malaptops, kunyangwe kana tichishuvira isu tinogona kutora mukana weyese tambo yevatatu mativi pachigadziko, kana kunakidzwa nayo system iyo inotibvumidza kuti tisiye isu zvakananga patafura. Kune dzimwe nzira dzakawanda dzaanotipa, kunyanya kana tichifunga kuti kamera inokwanisa kutenderera pachayo yakatwasuka uye yakatwasuka. Kusawirirana nemureza mune ino webcam ine maikorofoni yakavakirwa.
Tiri kunakidzwa newebhu webcam neiyi Yealink UVC20 iyo inopa autofocus renji iri pakati pe 10 masentimita uye 1,5 metres. Tine tambo kumashure USB 2.0 2,8 metres ayo anozokwana kupfuura kukwana kwenzvimbo dzese. Nekudaro, inguva yekutarisa pane yako sensor, isu tine modhi 5 MP CMOS ine f / 2.0 aperture iyo inokwanisa kupa vhidhiyo kuburitsa pa 1080p FHD resolution pa30FPS seyakanyanya kugona. Kune mhedzisiro inogonesa ine autofocus inoshanda zvinoshamisa uye ine simba renji kune yakanaka-tune kusiyanisa uye kupenya.
Chigadzirwa chichava chinoenderana ne Windows uye macOS pasina dambudziko. Kune chikamu chayo, maikorofoni ndeye omni-inongedzera uye ichave neiyo SNR yepamusoro 39 dB. Iyo frequency frequency, hongu, yakasimba pakati pe100 Hz uye 12 kHZ, mhedzisiro inochengetedza. Hatina kuwana chero dambudziko muhunyanzvi hwekugona, muchokwadi isu taiti takashamiswa nekugona kweYealink UVC20 kupa mhedzisiro yakanaka kunyangwe nematambudziko emwenje ari pachena munzvimbo yekubatwa.
Iyo kamera ine yakazara yakazara plug-uye-yekutamba system, Izvi zvinoreva kuti isu hatichafanirwa kuita chero mhando yekumisikidzwa isati yashandiswa, chokwadi chekuti hatina kana software yekurodha pasi yechinangwa ichi inopupurira izvi. Kana tangobatanidza iyo Yealink UVC20 kamera kuburikidza ne USB chiteshi, tinoiwana iri pakati peaodhiyo nemavhidhiyo masosi patinosheedzera vhidhiyo kuburikidza nezvirongwa zvakasiyana zveichi chinangwa. Mune ino kesi isu tichawana ese ari maviri makamera uye maikorofoni yekamera pachayo zvakasiyana, zvichitibvumidza kushandisa edu pachedu mamaikorofoni kana tichida.
Isu tichangobva kushandisa kamera kurekodha Podcast yevhiki nevhiki yeiyo ikozvino iPhone navo uye iwe unogona kuiwona mune yakadzamidzirwa vhidhiyo. Iyi ndiyo nzira yakakodzera kwazvo yekuona mashandiro ekamera, kunyangwe hongu, mune ino kesi takashandisa imwe sosi yekuteerera. Iyo kamera ine otomatiki inokurumidza autofocus, izvo zvakandishamisa kunyangwe mumamiriro asina mwenje emwenje, uye ichi ndicho chimwe chezvinhu zvakakosha zvekufunga nezvazvo, chokwadi chekuti autofocus ichatibvumidza kufamba pamberi payo pasina matambudziko mazwi aya.
Iyo kamera haina kudhura zvakanyanya, uye dambudziko hombe randakasangana naro inyaya yekuti haina kunyorwa sechigadzirwa chiripo kuAmazon. Unogona kuiwana pamawebhusaiti senge Onedirect pamutengo unokurudzirwa we89,95 euros, Tichifunga kuti icho chigadzirwa chakasimbiswa cheMicrosoft Teams uye Zoom, zvinoita kunge zvisingaite.
Kuita kwacho ndiko kwaizotarisirwa nemunhu kubva muchigadzirwa chine hunhu uhu, zvimwe chete zvinoitika nekukosheswa kukuru kweiyo base uye nekuvandudzwa kwakanaka kwekutarisa otomatiki panguva yese yekufona kwevhidhiyo, pasina kupokana chigadzirwa chatinogona kukurudzira kana iwe uri kutsvaga kuvandudza mharidzo dzako.
Yakatumirwa pa: 8 June we2021
Kugadziridza kwekupedzisira: May 29 we2021
Kugadziridza / Kushandisa
Dhizaini uye zvigadzirwa zvinonzwa "premium"
Chinyorwa chinonyanya kushandisika uye chiri nyore kushandisa
Yakanaka kwazvo mhedzisiro yekamera uye autofocus
Ini ndasuwa USB-C adapta
Iwo mashoma mashoma mapoinzi ekutengesa muSpain
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Reviews » Yealink UVC20, shamwari yakanaka ye teleworking [Ongororo]
Hoover H-Anonatsa 700, ongororo yeiyi hombe mhepo yekuchenesa